८८ वर्षको उमेरमा प्रेम विवाह : Sajha Network - Nepal's No. 1 Online News Portal
December 10, 2016 मा प्रकाशित
प्रेम सुनार, गुल्मी मंसिर २४।
प्रेम र विवाहलाई उमेरले छेक्दैन, रोक्दैन भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरणका पात्र हुन घमिरका एक जना बृद्ध । घमिर गाविस वडा नम्वर ३ का पुर्णबहदुर मगरले ८८ वर्षको उमेरमा गरेको प्रेम विवाह निकै सफल र सुखद् बनेको छ ।
८८ वर्षीया नव बिबाहित जोडी
विसावाईसे उमेरका ठिटाठाटीको भन्दा उहाँकी ७० वर्षिय पत्नी शिवकुँवरी संगको दाम्पत्य जिवन कम छैन् । चाहे त्यो आपसमा जिस्कीने कुरामा होस वा भविश्यको वारेमा सोच्ने कुरामा होस् उनिहरुको गुनगुन् चलिरेकै हुन्छ अल्लारे उमेरका बुढाबुढीको जस्तै । उमेर ८८ नाघेर ८९ वर्षमा पाईले टेके पनि सानो गाँठीका मगर बृद्ध रातो पिराउँदो मुहारले तन्नेरी जस्तै देखिन्छन् ।
भारतिय सेनाका पेन्सनवाला हुन् उनि । जेठी पट्टीका चार छोरा र चार छोरी मध्ये जेठा छोरा र जेठी छोरीको उमेर ६० नाघेको छ । हँसीला फरासीला र ठट्टालु स्वभावका उनलाई अझै पनि सन्तान जन्माउने ईच्छा छ कि ? भनेर जिस्कीउँदा जन्मे के फरक प¥यो त भन्ने ठट्टालु जवाफ दिन्छन् । आज भन्दा २२ वर्ष अघि पेन्सन निस्केका उनि श्रीमतिको मृत्यु भए पछि एक्लो हुनु पर्यो ।
उता हालकी उनकी श्रमतिले पनि श्रीमान गुमाउनु पर्यो । अन्ततः गाउँमा ति दुई एक्लाहरुको आ–आफ्नो पत्नी वियोग र पति वियोगको पिडामा वसेको धेरै बर्ष पछि हिउँपेउँ बढ्दै जान थाल्यो । दुवै एक्लाहरुको हेउपेउ र मिलनलाई उनीहरुका सन्तान भाई बन्धुहरुले पनि समर्थन गर्न थाले ।
फलतः एउटा यस्तो गितको बोल –‘ हे….बल्ल भेट भयो जुनको र ताराको, दुबै कर्महाराको… भने जस्तै दुवैको भेट भयो ८८ र ७० वर्षको उमेरमा नव वेहुला र वेहुलीको रुपमा । यो संयोगलाई गाउँवासीले निकै सराउँदै आएका छन । त्यसलाई अनौठो प्रेम विवाहका रुपमा गाउँवासीले चर्चा गर्ने गरेका छन ।
विद्याताले एकल बनाए पनि सधै एकल भएरै बस्नु पर्छ भन्ने पुरानो मान्यतालाई पनि तोडेको छ । यो बुढेशकालमा दुवैले जोडी पाएका छन् । निकै खुशी छन् श्रीमान श्रीमति दुवैले दाउरा–घाँस मेला–पात सवै काम गर्न सक्छन् । लोकल कुखरा, खसी बोका र दुधाले भैसी पालेका छन् । माछा मासु, सागपात , दुध दही नटुटे पछि थप रातो पिराउँदो बन्दै गएका छन् । अहिले त्यो उमेरमा उनिहरुमा विसावाईसे उमेरको बैश फर्केको छ ।
यता गुल्मीकै रेसुङ्गा नगरपालिका ८० वर्षिय नामबहादुर बिक (नाम परिवर्तन)ले २६ वर्षिया युवती संग विवाह गरेर त्यो उमेरमा छोरी जन्माएका छन् । मृतक पुर्व पत्नीका छोरा छोरीहरु शिक्षित र विभिन्न क्षेत्रमारहेको भन्दै उनिहरुको ईज्जतमा दाग लाग्ने भन्दै बिकले आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहे ।